Nosy malagasy : mandrirarira resaka ny mpitondra | NewsMada
Nosy malagasy : mandrirarira resaka ny mpitondra
“Tsy niresaka an’io aho teo amin’ny polipitra. Nefa efa mandeha ange ny adihevitra momba azy io aty amin’ ny Frantsay. Heveriko fa misy fandaminana asa tsy maintsy apetraka. Misy tetika diplaomatika tsy maintsy apetraka. Misy tetika tsotra izao fotsiny apetraka amin’ilay izy“.
Izay indray no nambaran’ ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny mpanao gazety teny New York, Etazonia, afakomaly, momba ny fitakiana ny hamerenana amin’i Madagasikara ireo Nosy malagasy mbola eo an-tanan’ny fanjakana frantsay. Taorian’ ny kabariny tamin’ny fivoriana faha-72 nataon’ny Firenena mikambana (ONU) no nilazany izay.
Efa 35 taona mahery lasa no efa nisy ny fehinkevitra aty amin’ny ONU, fa tokony homena an’i Madagasikara ireo Nosy ireo, tokony hifampidinika ny fanjakana frantsay sy ny fitondrana malagasy. Maninona no tsy nihetsika ny olona tao anatin’izay elanelam-potoana izay?
“Izaho no nanetsika an’io voalohany tamin’ny filoha frantsay, François Hollande, ary mbola niresaka momba azy io aho rehefa nihaona tamin’ny filoha frantsay vaovao ary nifanaiky izahay fa hifampidinika momba azy io“, hoy izy. Any anaty komity no efa mifampidinika momba ireo Nosy malagasy ireo.
Lany andro amin’ny fifampidinihana… lava
Fifampidinihana amin’ny kiantranoantrano afenina amin’ny hoe diplaomasia tsy mazava noho ny tahotra amin’ ny ampitso ampitso lava no atao? Fa fitakiana amin’ny fampiharana ny fehinkevitry ny ONU ny amin’ny tokony hamerenana ireo Nosy malagasy ireo amin’i Madagasikara.
Tsy amin’ny fivoriamben’ ny ONU toy ireny ve no tena fanararaotana amin’ny fampiharana izay tapaky ny ONU ? Eny, na ho tonga amin’ ny fanerena ankolaka na mivantana aza… Inona loatra no mety ho tambiny ambadika amin’ny fanetsehana voalohany indray ny raharaha?